अर्थमन्त्री खतिवडाले कसैलार्इ थाहा नदिर्इ किन गुपचुप रूपमा बनाए बजेट ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
अर्थमन्त्री खतिवडाले कसैलार्इ थाहा नदिर्इ किन गुपचुप रूपमा बनाए बजेट ?
बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। केपी अाेली नेतृत्वकाे सरकारमा धेरैले अाशावादी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरेका डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माण गर्दा धेरै हाेसियारीपूर्वक गुपचुप रूपमा बनाएकाे खुलासा भएकाे छ । उनले बजेट गोप्य दस्तावेज भएको भन्दै बजेट निर्माणमा पहिले नै हुने सूचना चुहावट रोक्न सबै ‘टुल्स’ प्रयोग गरेकाे स्राेतबाट विशेष खुल्न अाएकाे छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा स्वयंले बुधबारको एक पत्रकार सम्मेलनमा ‘बजेट निर्माणमा गोप्यता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने’ सबैलार्इ धन्यवाद नै दिए । उनकाे अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ कि यस पटककाे बजेट गाेप्य रूपमा बनाइयाे । ‘बजेट निर्माणमा गोप्यता चाहिन्छ, यस क्रममा अर्थमन्त्रालयलार्इ इन्सुलेटेड एरियाको रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने मेराे मान्यता थियाे,’ बुधबार उनले भने, ‘त्यसमा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै हाेइन, तपार्इ पत्रकारले समेत सहयोग गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
स्राेतका अनुसार बजेट प्रस्तुत हुने दुर्इ दिनअघिदेखि बजेट निर्माणमा संलग्नबाहेक अरूलार्इ अर्थमन्त्रालयमा छिर्न समेत राेकिएकाे थियाे । बजेटको आकारका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवलार्इ समेत थाहा दिइएकाे थिएन । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन मात्रै उनीहरूलार्इ थाहा दिइएकाे अर्थमन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
अाखिर अर्थमन्त्री खतिवडाले किन यसरी गुपचुप रूपमा बजेट बनाए त ? स्राेतका अनुसार उनी करकाे दायरामा भएकाे हेरफेर लगायतका सूचना पहिले नै बाहिर अाउन नदिन र अाफू कुनै विवादमा नआउन यतिधेरै चनाखो भएर गाेप्य रूपमा बजेटकाे तयारी पूरा गरिएकाे हाे । बजेटको आकारको जिम्मा समेत उनले अाफ्ना विश्वासपात्र बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीलार्इ दिएका थिए।
बजेटलार्इ गोप्य राख्न सक्नु अर्थमन्त्रीकाे सफलता मानिन्छ । बजेटको गोप्यता कायम राख्न मुद्रण विभागमा छाप्न समेत मंगलबार दिउँसाे १० बजे मात्रै पठाइएको थियो । यसअघिका वर्षहरूमा भने राति नै बजेट छाप्न पठाइन्थ्यो र मुद्रण विभागबाटै बजेटका कतिपय सूचना चुहिसकेका हुन्थे । विगतमा केही व्यापारिक घरानाले विभिन्न तवरबाट राजस्वका दरहरु पहिले नै पाउने गरेकाे बताइन्छ ।
यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाकै कारण बजेटमा हुने पूर्वसूचना चुहावट विगतमा जस्ताे भएन । यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत बजेटको आकारका बारेमा जानकारी नदिएकाे, केपी अाेली सरकारका कतपय कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएकाे, उनी अाफ्नै ढंगले एकलाैटी रूपमा अघि बढेकाे लगायत अाराेप सत्तापक्षकै सांसदहरूले लगाउन थालेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट माथिको छलफल जारी (लाइभ भिडियाे)
NEXT POST Next post: वास्तविक नाम लुकाएर हिट भएका नेपाली कलाकारहरु (भिडियो)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ १७, २०७५ ११:४८